Cross body 2020 Mgbụsị akwụkwọ oyi PU Akpụkpọ anụ Ejiji Argyle Jirinụ Chain akpa okomoko ozi akpa Crossbody na Mink Fur
2021 ejiji akwa akpụkpọ ụkwụ dị elu
Cross ahu 2020 Mgbụsị akwụkwọ Winter PU Akpụkpọ anụ F ...
Hot n'ire ọnụ ala OL akpa kpochapụwo 4 col ...
2020 New abịa America Vintage Christma ...
Xinzi mmiri ozuzo New Design Beautiful Women Ladi ...
New Model Women Summer Korean Sexy High Ọ ...
Xinzi mmiri ozuzo akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ ForeignTrad ...
Ngwunye a na-achọ mma mma bụ nnukwu ọsọ ọsọ, anyị hụkwara otu nkọwa zuru oke si arụ ụdị a. Ejiri mkpịsị aka aka na ikiri ụkwụ kpuchiri ụkwụ dị warawara, a na-akọwapụta mgbapụta ahụ na nkwonkwo ụkwụ ya na eriri eriri.
Nọmba nlereanya: 9032
Isi ihe: PU Sịntetik Akpụkpọ anụ
Agba: White / Black / Blue / Pink / Agba aja
Ìgwè mmadụ na-ege ntị: Mụ nwanyị, Ladmụ nwanyị na Girlsmụ Nwaanyị
Ogologo ubu: 108cm
Ọrụ: Oge Omuma
Ahaziri arụ ọrụ
Ahaziri ọrụ na ihe ngwọta.
Ugbu a ụlọ ọrụ ahụ na-agbasawanye ahịa mba ofesi na nhazi ụwa niile ma anyị gbalịsiri ike ịghọ Chengdu akpụkpọ ụkwụ ụmụ nwanyị na-ebupụ ụlọ ọrụ iri kachasị elu na ebumnuche nke ọrụ akpụkpọ ụkwụ ụmụ nwanyị dị elu na ụwa n'ọdịnihu afọ atọ.
Nke gara aga: Hot n'ire ọnụ ala OL akpa kpochapụwo 4 agba 3-mpempe set wine pu akpụkpọ anụ inyom Tote aka akpa
Osote: Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ anụ nke onwe ya na ifuru nsure ọkụ
Q1: you bụ onye nrụpụta ma ọ bụ ụlọ ọrụ azụmaahịa?
Anyị bụ ndị na-emepụta akpụkpọ ụkwụ ụmụ nwanyị nwere ihe karịrị 12years ọkachamara.
Q2: you nwere ike ịme ihe ahụ maka anyị?
Ee, anyị nwere ọkachamara imewe & technic otu na ọgaranya ahụmahụ na mmepe, anyị mere ọtụtụ iwu maka ndị ahịa anyị na ha chọrọ kpọmkwem.
Anyị nwere ọkachamara QA & QC otu na ga-n'ụzọ zuru ezu soro iwu site na mmalite na nnọọ ọgwụgwụ, dị ka ịlele ihe onwunwe, ilekọta mmepụta, ntụpọ-achọpụta na okokụre ngwongwo, ịtụkwasị mbukota, ect. Anyị na-anabata ụlọ ọrụ nke atọ nke ị họpụtara iji nyochaa iwu gị nke ọma.
Q4: Gịnị bụ gị MOQ nke ngwaahịa?
MOQ nkịtị bụ ụzọ iri na abụọ.
Q5: Gini maka oge mbu maka imeputa ihe?
N'ikwu eziokwu, ọ ga-adabere n'ụdị na ịhazi ọtụtụ, mgbe, ọ na-abụkarị, oge mbu nke iwu MOQ ga-abụ 15-45 ụbọchị mgbe ịkwụ ụgwọ.
Q6: Olee otu m ga-esi kwere na mgbe ịkwụ ụgwọ ị nwere ike izigara m ngwongwo ahụ?
I ghaghi ichegbu onwe gi banyere ya. Anyị bụ ndị na-akwụwa aka ọtọ ma nwee ntụkwasị obi. Nke mbụ, anyị na-azụ ahịa na Alibaba.com, ọ bụrụ na anyị ezigaghị ngwongwo ahụ mgbe anyị natachara ụgwọ ahụ, ị ​​nwere ike ịme mkpesa na Alibaba.com ma mgbe ahụ Alibaba.com ga-ekpe gị ikpe. E wezụga nke ahụ, anyị bụ onye so na Alibaba.com Nkwado ahia na US 68,000 akwụkwọ ikike, Alibaba.com ga-ekwe nkwa ịkwụ ụgwọ gị niile.
Ndị eji aka ha eji eme ihe
Sexy mere ka eriri akpụkpọ ụkwụ diamond dị egwu
Spring ọhụrụ nkume ụkpụrụ patent akpụkpọ anụ metal h ...
2021 Fashion na Hot Ree Popular Bọmbụ gbawara agbawa Mod ...
Ejiri mee ezigbo akpụkpọ anụ 2021 ọhụrụ ladies san ...
Multi-agba omenala logo plus size inyom sexy h ...
Hot n'ire ala price OL akpa kpochapụwo 4 agba 3 -...